48CrMo Tungsten Carbide Corrugated Roller China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:အီး Flute Corrugating Roll,နှစ်ချက်ဘေးထွက် Corrugated Roll,လူပျို Facer များအတွက်မြှောင်းပုံလိပ်
Home > ထုတ်ကုန်များ > Corrugating Rolls > 48CrMo Tungsten Carbide Corrugated Roller
48CrMo Tungsten သူ၏ပွန်းပဲ့ခုခံနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဘဝအရည်အသွေးနှင့်ချွေတာထိရောက်မှုတိုင်းတာမှုအတွက်အဓိကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါတယ်မြှောင်းပုံ Cardboard စက်လိုင်း၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် carbide မြှောင်းပုံကြိတ်စက်တိုက်ရိုက်မြှောင်းပုံကတ်ထူပြားတို့အတွက်ထုတ်လုပ်သူများ၏စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်သြဇာလွှမ်းမိုး။
ကလစ်နှင့် Lacer: စွဲစေသံမဏိ Clipper / Conveyor Belt Clipper / Hardware Clipper
1. Corrugating Rolls များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသံမဏိများနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါနည်းပညာစစ်စက်မှုလုပ်ငန်းကနေလာပါတယ်။
၂။ ၎င်းကိုယူအက်စ်မှမြင့်မားသောတိကျသော CNC မြှောင်းပုံလိပ်ကြိတ်စက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အရည်အသွေးကအရမ်းကောင်းတယ်
၃။ ၎င်းကိုအထူးမြှင့်ထားသောနံရံမျက်နှာပြင်ဖြင့်ပြုလုပ်သောနည်းပညာဖြင့်ကုသသည်။ မာကျောမှုသည်အလွန်မြင့်မားသည်
ကြီးမားသောအချင်းနှင့်အတူ 4. မြန်နှုန်းမြင့်မြှောင်းပုံလိပ်။ အများဆုံးအလုပ်လုပ်နှုန်းမှာ ၃၀၀ မီတာ / မိနစ်ဖြစ်သည်။
5. ဂီယာအမျိုးအစား: ခရမ်းလွန်, V ကို။ Flute အမျိုးအစား: A, B, C, BC, D, E, F optional ။
၆။ Fingerless စုပ်ယူခြင်းနှင့်အတွင်းစုတ်ယူခြင်းတို့သည်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
၇။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီဇိုင်းပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်မြှုပ်နှံခြင်းအမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်သည်
Tungsten Carbide Corrugated Roller နည်းပညာ Parameter
၁.၁ သွားပုံစံ: ခရမ်းလွန်၊ V၊
1.2 သွားအမြင့်: 0.9-5.5mm
1.3 လုပ်ငန်းစဉ်အရှည်: မက်စ်။ roller အရှည် 2800mm
1.4 လုပ်ငန်းစဉ်အချင်း: Φ 100mm ~ Φ 500mm
၁.၅ ပစ္စည်း - တရုတ်၊ 42CrMo ~ 50CrMo ဖြင့်ပြုလုပ်သည်
၁.၆ ခိုင်မာခြင်း≥ HRC55 °
2. လေဆာရောင်ခြည်လှိမ့ Roll
၂.၁ မျက်နှာပြင်ခိုင်မာခြင်း - HRC60 °အထက်
၂.၂ လေဆာမီးငြိမ်းသတ်ခြင်း၏သဘောသဘာဝ - တူညီသောပစ္စည်းအတွက် metallographic ဖွဲ့စည်းပုံသည် ပို၍ သန့်စင်သည်။ ထို့ပြင်၎င်းသည်ရိုးရာမီးရှူးဖြစ်စဉ်ထက် ပို၍ တာရှည်ခံသည်။
၂.၃ မျက်နှာပြင်အက်ကွဲခြင်းကိုမတိုးစေပါ။ ဒါဟာ roller အဟောင်းကိုပြုပြင်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။
၂.၄ မီးငြိမ်းသတ်သည့်အလွှာ၏အတိမ်အနက်ကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်သွား၏ထိပ်သည်ထူပြီးသွား၏ဘေးသည်ပါးလွှာသည်။ ဒါဟာ roller ၏အဓိကဝတ်ဆင်အစိတ်အပိုင်းကိုသွား၏ထိပ်သောပြproblemနာကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
၃.၁ မာကျောမှု - HRC62 °အထက်
၃.၂ သက်တမ်းရှည် - သက်တမ်းသည်အလယ်အလတ်ကာဗွန်ခရိုမီယမ်မော်လီဗန်ဒင်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သော roller ထက်အသက် ၅၀% ပိုများသည်။
၃.၃ ကုန်ကျစရိတ်နိမ့်ခြင်း။ ။ အလယ်အလတ်ကာဗွန်ခရိုမီယမ်молဘဒီနမ်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သော roller ထက်စျေးနှုန်းသည် ၂၀% ပိုမိုမြင့်မားသည်။
၄။ Tungsten Carbide
4.1 မျက်နှာပြင်ခိုင်မာခြင်း: HRC70 °အထက်
၄.၂ ပုလွေအမြင့်သည်အလွယ်တကူမဝတ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်သင် roller တွေကိုမကြာခဏပြောင်းစရာမလိုပါ။ ၎င်းသည်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောပုလွေအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုသည်။
A, B, C, E, F Flute Corrugated Roller ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Tungsten Carbide Corrugated Roller Delivery:
သင့်တင့်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုစျေးနှုန်းသင့်တင့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ရှာရန် HUATAO ကသင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုစျေးသက်သာ။ လေယာဉ်ဖြင့်လုံခြုံမှုဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ပါ။ သွင်းကုန်အခွန်လျှော့ချရေးအတွက်ဖောက်သည်များအတွက် [မူရင်းလက်မှတ်၊ [FORM E ", [ဖောင်ဒေးရှင်း" နှင့် "FTA" တို့ကိုလုပ်ပေးပါ။ အခြားလက်မှတ်များကိုလည်းသင့်ရဲ့တောင်းဆိုမှုအဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေရန်လည်းသင့်အားကူညီပေးပါမည်။ လိုအပ်ပါကတရုတ်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးပါ။ HUATAO = သင်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။ တရုတ်နှင့်ပူးပေါင်းပါ။
ABCEF Flute Corrugated Roller အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အီး Flute Corrugating Roll နှစ်ချက်ဘေးထွက် Corrugated Roll လူပျို Facer များအတွက်မြှောင်းပုံလိပ် F Flute Corrugating Roller Flute Corrugator Roller Chrome Plated Corrugating Roll Corrugating Rolls Corrugating Roller